प्रलेस: आन्दोलन कि ट्याग- विचार - कान्तिपुर समाचार
के यी कुराका लागि प्रलेसबाट लेखकहरूको घोषित बहिर्गमन नै जरुरी थियो ? के यी विषयमा प्रश्न उठाउने र बहस गर्ने ‘स्पेस’ त्यहाँभित्र नभएकै हो ?यिनै आधारमा प्रलेसभित्रको सबैभन्दा सिर्जनशील मानिसको दस्ताले प्रलेस छाडेर अर्को साझा मोर्चा चाहिएको तर्क गर्नुपर्थ्यो कि अझै विकल्पजीवित थिए ?
प्रगतिशीलताको मानकविपरीत पश्चयात्रा रोज्ने कि जुगले तय गरेको अग्रगामी बाटो पक्रिने ? अहिले प्रलेसको मुख्य घर्षण यही हो । आजको विवादको विषय ‘सरकारी प्रगतिशील’ हरूले आरोप लगाएजस्तै केही व्यक्तिका पद, स्थानमान वा अन्य कुनै लुकेको प्रस्ताव पूर्ति नहुँदाको परिणति होइन,नत नेतृत्वले विज्ञप्तिमार्फत भनेजस्तै निष्क्रियहरूको अरण्यरोदन नै हो ।
ट्वीटर : @saritatiwari36 प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ०८:१५
काठमाडौँ — नेपाल बार एशाेसिएसनको केन्द्रिय कार्यसमिति निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहको अग्रता देखिएको छ । मंगलबार जारी मतगणनामा प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्ष उमेद्वार चण्डेश्वर श्रेष्ठकाे १९६ र लोकतान्त्रिक समूहका सुनिलकुमार पोखरेलको १०९ मत पुगेकाे छ ।
महासचिवमा प्रगतिशील समूहका सुरेन्द्रबहादुर थापाकाे १८५ र लोकतान्त्रिक समूहका लिलामणि पौडेलको १११ मत पुगेकाे छ ।
‍एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि शनिबार निर्वाचन भएको थियाे । मतगणना जारी छ ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ०८:१३